Somali daily News – Kooxda Chelsea oo si kumeel gaar ah u qabatay horyaalka England – Premier League
Kooxda Chelsea oo si kumeel gaar ah u qabatay horyaalka England – Premier League
(xamarweyne.com):-Kooxda JKubada Cagta Chelsea oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan Horyaalka England – Premier League ayaa xalay guul weyn gaartay markii ay kulankooda 11aad isku arkeen kooxda Everton.
Chelsea ayaa ku adkaatay 5-0 taasoo u suurtagelisay inay hogaanka tartanka la wareegaan si Kumeelgara ah madaama ay caawa ciyaari doonaan kooxihii hore hogaanka u hayay sida Arsenal iyo Liverpool.
Kooxda Man City oo ka midah sedexda kooxood ee isku hayay horyaalka ayaa shalay ku dhiiqatay kulankii ay la yeesheen Kooxda Middlesbrough taasoo ku soo idlaatay bar baro ahaa 1-1.
Liverpool waxay la ciyaari doontaa caawa Kooxda Watford halka Arsenal ay la ciyaari doonto Kooxda ottenham Hotspur oo ka mid ah kuwa safka hore islamarkaana kulanmada intooda badan guulo ka gaaray.
Si kastaba Chelsea waxay hadda dhibcaha leedahay 25 ,sidoo kale Manchestrer City ayaa leh 24 dhibcood halka Arsenal iyo Liverpool ay wada leeyihiin min 23 dhibcood waxayna fursad u heystaa inay hogaanka qabtaan hadey badiyaan kulamadooda caawa.